GAFAM Open Source: နည်းပညာအရင်းအမြစ်များကို Open Source ၏မျက်နှာသာပေးသည် Linux မှ
များအသုံးပြုမှု အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းနည်းပညာများ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ၎င်းသည်လူများနှင့်အကြားပိုမိုကျယ်ပြန့်သည် Technosocial အဖွဲ့အစည်းများဒါပေမယ့်လည်းအကြား အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများအထူးသဖြင့်ကမ္ဘာ့နည်းပညာနယ်ပယ်ရှိသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများအကြားတွင်အတိုကောက်အားဖြင့်လူသိများသည် «GAFAM».
အကြောင်းအရာနှင့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်မည်မဟုတ်သောသူတို့အဘို့ «GAFAM»အရင်ပို့စ်တစ်ခုမှာရှင်းပြခဲ့တယ် «GAFAM» တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အတိုကောက် ၏အတိုကောက်ကဖွဲ့စည်းခဲ့သည် «Gigantes Tecnológicos» အင်တာနက် (ဝဘ်) ၏၊ «Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft»အလှည့်အပြောင်းမှာကမ္ဘာပေါ်ရှိဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ကိုလွှမ်းမိုးသောထိပ်တန်းအမေရိကန်ကုမ္ပဏီငါးခုဖြစ်သည် Big Five (ငါးပါး) ။
"ဒီပစ္စုပ္ပန်မှာတော့ စတုတ္ထစက်မှုတော်လှန်ရေး, ၏လက်ရှိဂေဟစနစ် (Applications ကို, စနစ်များနှင့်ပလက်ဖောင်း) ၏ဂေဟစနစ် «Software Libre y Abierto» ၏မွေးစားမှုမျက်နှာသာ «nuevas tecnologías»ဤအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတွင်အဖွဲ့အစည်းများအားပိုမိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီးအကျိုးအမြတ်ပိုမိုရရှိစေခြင်း။ လူ့အချက်သည်အဓိကကျသော်လည်းအထူးသဖြင့်ဤကိရိယာများကိုလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်တွင်ရှိသည်။"
အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်, ငါတို့မဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသိအမှတ်ပြုမှုထက်ကျော်လွန်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာတစ်ခုခုအဖြစ်မွေးစားခြင်းနှင့်အသုံးပြုမှု၏ကြီးထွားလာခြင်းနှင့်တိုးတက်သောဖြစ်စဉ်အဖြစ်ရှုမြင်ရပါမည် အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းနည်းပညာများ အားလုံးအဆင့်ဆင့်မှာမဆိုသရုပ်ဆောင်အားဖြင့်။ သို့သော်လူတစ် ဦး ချင်းစီသည်ဤကိစ်စနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောတန်ဖိုးထားမှုရရှိစေရန်ဤစာစောင်ကိုဖတ်ပြီးသည့်အခါအောက်ပါတို့ကိုလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် ယခင်အကြံပြုရေးသားချက်များ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်ကိုချဲ့ထွင်ရန်နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြရန်။
စတုတ္ထစက်မှုတော်လှန်ရေး - ဒီခေတ်သစ်တွင်အခမဲ့ဆော့ဝဲ၏အခန်းကဏ္။
အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းဆော့ဝဲ - အဖွဲ့အစည်းများအပေါ်နည်းပညာဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု
ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်အခမဲ့ဆော့ဝဲ - နည်းပညာအတွက်ကောင်းမွန်သောအနာဂတ်
1 GAFAM ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်
1.1 GAFAM ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်လှုပ်ရှားမှု - Open Source အတွက်သို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ခြင်း
1.2 ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်မှ GAFAM ပံ့ပိုးမှုများ
GAFAM ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်လှုပ်ရှားမှု - Open Source အတွက်သို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ခြင်း
ယနေ့တွင်အများပိုင်နှင့်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောပေါင်းစည်းမှုဆီသို့ ဦး တည်နေသည် အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် သူ့အတွက် စီးပွားရေးမော်ဒယ်များ၊ ပလက်ဖောင်းများ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ။ ဆိုလိုသည်မှာ အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းနည်းပညာများ ၎င်းတို့သည်သူတို့၏ပိုင်ရှင်များ၊ ဖောက်သည်များသို့မဟုတ်နိုင်ငံသားများ၏အကျိုးအတွက်၎င်းတို့ထဲမှထွက်ပေါက်နှင့်ထွက်ခွာခြင်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
များသောအားဖြင့်၎င်းသည်များသောအားဖြင့်အသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းနည်းပညာများ ဒါဟာခွင့်ပြု ရွှေ့ပြောင်းနှင့်ခေတ်မီအရှိန်မြှင့် မိုthe်းတိမ်နှင့်အခြားနည်းပညာအသစ်များကို ဦး တည်သည် ဒီထက်နည်းအတွက်ပိုမိုသုံးစွဲနိုင်ကုန်ကျစရိတ် ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်လုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိခြင်း။
အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများအထူးသဖြင့်အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ၏ချဉ်းကပ်မှုနှင့်ပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွေ့မြင်လေ့မရှိပါ နည်းပညာဆိုင်ရာ Giants (GAFAM) ၏လယ်ပြင်၌တည်၏ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၊ ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်နှင့် GNU / Linux။ ဒါပေမယ့်ဒါကလမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်တယ်၊ မင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြည့်ရမယ် အပြုသဘောနှင့်ဆိုးကျိုးများ သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်များနှင့်အကျင့်၏။
ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအဖြစ်ကရိပ်မိ သံသယဖြစ်ဖွယ်ပေမယ့်အပြုသဘောတစ်ခုခုများသောအားဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်အရာများမဟုတ်သော၊ များသောအားဖြင့်လူသိများထင်ရှားသောဖြစ်ရပ်များ၊ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များကိုအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောသူများကြောင့် privacy, အမည်ဝှက်ခြင်းနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးပုံမှန်အားဖြင့်။
ဤအကြောင်းကြောင့်တစ် ဦး ချင်းစီသည်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိတို့၏ထင်မြင်ချက်ကိုရေးသားရမည်ဖြစ်ကြောင်းထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။ အကြံပြုထားသည့်ယခင်ပို့စ်များသည်၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်ရေးသားရန်အတွက်ကောင်းသောအစဖြစ်သည်။
ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်မှ GAFAM ပံ့ပိုးမှုများ
သင်ပေးထားသော link တစ်ခုစီ၏နောက်မှတွေ့နိုင်သည် Tech Giants ကြောင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် GAFAM၊ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကြီးထွားလာရှိပါတယ် Open Source ဆော့ဝဲလ်ကတ်တလောက် စူးစမ်းလေ့လာသင့်သည် -
Google ၏ Open Source
Apple က Open Source
Facebook သည် Open Source ဖြစ်သည်
အမေဇုံ Open Source
Microsoft ၏ Open Source
မှတ်ချက်ဖြေ - သူတို့ထဲကအတော်များများဟာသူတို့ကိုယ်ပိုင်တရားဝင် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များဖြစ်သော GitHub ကဲ့သို့သောပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်များအကြောင်းအထူးဘလော့ဂ်များ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် အောက်ပါဆက်စပ်2ပို့စ်များကိုစူးစမ်း သူတို့ဘယ်လိုဘယ်လိုအပေါ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရူပါရုံကိုဆက်လက်ဆက်လက်နိုင်အောင်ဘာသာရပ်နှင့်အတူ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီကတခြားဆက်စပ် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် နှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း (အလုပ်သမားများ / အသုံးပြုသူများ / ဖောက်သည်များ)။ ဤရွေ့ကားလှုပ်ရှားမှုပို။ ပို။ ပိုကောင်းသို့မဟုတ်ကွင်းဆင်း၏ရပ်ရွာလူထုနှင့်ကမ္ဘာ၏အခြားနိုင်ငံသားများအဘို့အမပါလျှင်။
အားလုံး - ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါ
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «GAFAM» လူအများလက်ခံကြိုဆိုသည့်တိုးတက်သောတိုးတက်မှုရှိသောပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့်၎င်း၏သံန္နိဌာန်ချထားမှုနှင့်သံသယဝင်မှုများနှင့်အခြားသူများအားလုံး ၀ ငြင်းပယ်ခြင်းတို့အတွက်ကတိကဝတ်သည်အလွန်အကျိုးရှိပြီးအသုံးဝင်သည်။ «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » NOTICIAS » GAFAM Open Source - နည်းပညာအရင်းအမြစ်များကို Open Source ၏မျက်နှာသာပေးသည်
gafam ဟာ open source ကိုအသုံးပြုပြီးမြှင့်တင်ပေးတယ်ဆိုတာဘုရားနဲ့နတ်သမီးလိုနတ်သမီးလိုလိုလိုမျိုးပေါ့
မင်္ဂလာပါ, MX2048 ။ ငါလုံးဝသဘောတူ, ဒါကြောင့်ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသံသယနှင့်အတူသော်လည်းအပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာတစ်ခုခုအဖြစ်ရှုမြင်ဒါကြောင့်။
သူတို့လွတ်မြောက်ခြင်းအပြင်ထောင်ပေါင်းများစွာသော“ လုပ်သား” များလွတ်လပ်စွာတိုးတက်မှုရရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်
မင်္ဂလာပါ, Nasher_87 (ARG) ။ သင်၏မှတ်ချက်နှင့်အကြောင်းအရာအတွက်ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
MerlinThe Magician ဟုသူကပြောသည်
စတိဗ်ဂျော့ဘ်၏ Facetime protocol ကိုထုတ်ပြန်မည်ဟူသောကတိကိုကျွန်တော်မှတ်မိချင်ပါသည်။ ဘယ်သူ့ကိုမှမြင်ဖူးလား ကောင်းပြီ ...
သို့သော်အက်ပဲအားဖြင့်ဆွစ်ဖ်ထုတ်ဝေရန်ကြိုးပမ်းမှုသည်အပြုသဘောဆောင်သော်လည်းသေချာပေါက်စိတ် ၀ င်စားကြောင်းကျွန်ုပ်အသိအမှတ်ပြုသည်။
The Big Five သည်အခြားသူများလုပ်သည့်အရာများကို durillos အနည်းငယ်ချွေတာရန်စိတ်ဝင်စားသော်လည်းသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်မျှဝေခြင်းကိုမလွယ်ကူပါ။
မင်္ဂလာပါ, MerlinThe Magician ။ သင်၏မှတ်ချက်နှင့်အကြောင်းအရာအတွက်ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Open Collective and Anartist - စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောယဉ်ကျေးမှုဝက်ဘ်ဆိုက်များ
အနည်းငယ်သာသိသော GNU / Linux ဖြန့်ဝေမှုများ DistroWatch တွင်မပါ